Nivavaka tao Amin’ny Zaridainan’i Getsemane Izy | Fiainan’i Jesosy
MATIO 26:30, 36-46 MARKA 14:26, 32-42 LIOKA 22:39-46 JAONA 18:1
NANKAO AMIN’NY ZARIDAINAN’I GETSEMANE I JESOSY
TOY NY RA NITETE NY HATSEMBOHANY
Avy nivavaka niaraka tamin’ireo apostoliny tsy mivadika i Jesosy. “Nankany amin’ny Tendrombohitra Oliva izy ireo, rehefa avy nanao hira fiderana.” (Marka 14:26) Niantsinanana nankany amin’ny zaridaina iray falehan’i Jesosy izy ireo. Getsemane no anaran’izy io.
Nasain’i Jesosy nijanona ny apostoly valo, rehefa tonga teo amin’io toerana mahafinaritra nisy hazo oliva io izy ireo. Angamba teo amin’ny fidirana mankao amin’ilay zaridaina izany, satria hoy i Jesosy: “Mipetraha eto fa izaho hankerỳ hivavaka.” Niditra tao amin’ilay zaridaina i Jesosy avy eo ary nentiny i Petera sy Jakoba ary Jaona. Nanomboka nitebiteby mafy izy ka niteny tamin’izy telo hoe: “Vonton’alahelo aho, toy ny efa ho faty. Mijanòna eto ka miaraha miari-tory amiko.”—Matio 26:36-38.
Nihataka kely i Jesosy ary “niankohoka tamin’ny tany ka nanomboka nivavaka.” Inona no nangatahiny tamin’io fotoana nampiady saina azy io? Hoy izy: “Ray ô, hainao ny zava-drehetra. Esory amiko ity kaopy ity, nefa aoka tsy izay tiako no hatao, fa izay tianao.” (Marka 14:35, 36) Tsy midika izany hoe tsy te ho Mpanavotra indray izy. Inona àry no tiany holazaina?
Hitan’i Jesosy avy tany an-danitra fa nijaly be ireo novonoin’ny Romanina. Izany koa no niandry azy ka tsy tiany ny nieritreritra an’izany. Efa lasa olombelona nanana fihetseham-po sy afaka nahatsapa fanaintainana mantsy izy. Tena nalahelo koa izy sao ho afa-baraka ny anaran’ny Rainy, satria hovonoina toy ny jiolahy izy. Nahantona teo amin’ny tsato-kazo toy ny mpanevateva an’Andriamanitra izy, ora vitsivitsy taorian’izay.
Nivavaka elaela i Jesosy ary niverina. Hitany natory izy telo ka hoy izy tamin’i Petera: “Tsy afaka niara-niari-tory tamiko adiny iray akory ve ianareo? Miambena sy mivavaha foana mba tsy ho resin’ny fakam-panahy.” Tsapany fa niady saina be koa izy ireo sady efa alina be tamin’izay, ka hoy izy: “Mazoto ihany ny saina, saingy ny nofo no malemy.”—Matio 26:40, 41.
Nandeha kely indray i Jesosy, ary nangataka tamin’Andriamanitra mba hanaisotra an’ilay “kaopy.” Niverina izy avy eo ary hitany fa natory indray izy telo, nefa tokony ho nivavaka mba tsy ho resin’ny fakam-panahy. ‘Tsy nahita havaly izy ireo’ rehefa niresahan’i Jesosy. (Marka 14:40) Lasa fanintelony i Jesosy ka nandohalika nivavaka.
Tena nanahy i Jesosy satria nety ho afa-baraka ny anaran’ny Rainy noho izy hovonoina toy ny jiolahy. Nihaino ny vavaky ny Zanany i Jehovah ka naniraka anjely iray hampahery azy. Mbola nitalaho tamin’ny Rainy anefa i Jesosy ka “vao mainka nivavaka mafimafy kokoa hatrany.” Nanana andraikitra lehibe izy ka niady saina mafy. Niankina tamin’izay nataony mantsy no hahafahany hiaina mandrakizay sy hahafahan’ireo mino azy hiaina mandrakizay. Lasa toy “ny ra nitete teo amin’ny tany ny hatsembohany.”—Lioka 22:44.
Hitan’i Jesosy natory indray ny apostoly rehefa niverina izy, ka hoy izy: “Mbola matory sy miala sasatra ihany ve ianareo amin’ny fotoana toy izao? Efa manakaiky anefa ny ora hamadihana ny Zanak’olona sy hanolorana azy eo an-tanan’ny mpanota. Mitsangàna, andao isika handeha, fa efa manatona ilay mpamadika ahy.”—Matio 26:45, 46.
Tsy nohazavain’i Lioka dokotera hoe ahoana no nahatonga ny hatsembohan’i Jesosy ho lasa toy ny “ra nitete.” (Lioka 22:44) Nety ho nampitahain’i Lioka tamin’ny ra mitete amin’ny ratra ilay hatsembohana. Hoy koa ny Dr. William Edwards, tao amin’ny Gazetin’ny Fikambanana Amerikanina Momba ny Fitsaboana: ‘Mahalana vao misy ra ny hatsembohana. Mety hitranga anefa izany rehefa miady saina mafy ny olona iray. Be loatra mantsy ny ra ao amin’ny fihary mamoaka hatsembohana ka lasa malemy sy mora triatra ny hodiny.’
Nankaiza i Jesosy sy ireo apostoly rehefa niala tao amin’ilay efitra ambony rihana?
Inona no nataon’ireo apostoly telo rehefa nivavaka i Jesosy?
Nahoana ny hatsembohan’i Jesosy no lasa toy ny ra nitete?
Hizara Hizara Vonton’alahelo Izy ka Nivavaka